Vanotsvakurudza kuziva chirwere chitsva mombe uye kudzivirira kubva pakuparadzira - China Chongqing Fangtong
Vanotsvakurudza kuziva chirwere chitsva mombe uye kudzivirira kubva pakuparadzira
Zvichitevera zvidzidzo majini akaremara mhuru, tsvakurudzo anokwanisa kusunungura munhu wamboonekwa chirwere kuwanikwa pakati Holstein mombe. The rutoto nzombe iyo mutation nokudaro deformation kuchibva hwakaiswa zvino pasi kudzivirira chirwere kubva kupararira mberi.
Mukati Danish mombe ruminant kuti urume mumwe maberekero nzombe rinoshandiswa inseminate yakawanda mhou. Nokuda vazhinji inseminations nzombe imwe anogona nokudaro baba zviuru mhuru. Naizvozvo, zvinokosha kuona kana ruminant nzombe itakurwe nhaka zvirwere.
Izvi ndizvo chaizvo vatsvakurudzi paUniversity Copenhagen vachangobva zvaitwa. Pakuongorora pakati Holstein nemhuru yakabudiswa mumagazini yesayenzi BMC genetics ivo vakawana imwe kusvikira undescribed chirwere pakati pemhuka - facial deformation vakasarudza kumutumidza chiso Dysplasia Syndrome. The nevatsvakurudzi majini mutation kuti chinokonzera chirwere pakati mhuru uye kurondwa nayo mumwe maberekero nzombe zvikuru. Nzombe raitwa zvino pasi kudzivisa zvimwe zviitiko chirwere pakati vachangoberekwa mhuru.
'Takaona kuti imwe maberekero nzombe vakava mutation iri mumasero urume-unobereka zvinyama, izvo zvakazoita kuti deformation pakati pemhuru. Nzombe vakapfuura mutation pamusoro 0.5 muzana vevana yayo chisingazivi unorira zvikuru. Asi nzombe ichi akanga abereka mhuru zvinopfuura 2,000 uye Tingangonyanya vakasvika baba kunyange zvakawanda. Vose kuremara mhuru akafa kana aifanira kuparadzwa nokuti vakanga vachitambura. Naizvozvo, zvaikosha kuziva chikonzero ', anodaro Purofesa Jørgen Agerholm kubva weDhipatimendi Veterinary Clinical Sciences.
Pashure ndagamuchira mashoko kubva Veterinarians zvemhuru vane chiso deformations, Jørgen Agerholm akanotsvaka zvakawanda nyaya mumidziyo yake mombe Veterinarians, kusanganisira pamusoro Facebook. Iye zvino mamwe mhuru kuongororwa.
DNA kubva akaremara mhuru akanga pasi kuvabereki zvidzidzo, uye pano vaongorori akazivisa zvinonyatsorehwa chikamu genome ine mutation haawaniki chaiye Holstein DNA. Izvi zvakakwanisika nemhaka anonyatsotsvaka zvapfuura mappings ose kwomuzvarirwo Holstein DNA.
Vaongorori vakanzwa kuti chiso deformations akafanana zvinowanikwa muvanhu, uye izvi zvinokonzerwa kunotouraya imwe chete chikamu genome, zvikuru Kunyanya FGFR2 Gene pakati vana vachangoberekwa. Gene Izvi sequenced ari mhuru 'genome, uye vaongorori vakanga ipapo kukwanisa kuona kuti munhu mutation iri Gene ichi akanga aita chirwere pakati pemhuru. Saka The chirwere kwevanhu akabatsira vatsvakurudzi vari mubishi yokuziva majini mutation.
Vaongorori akaongororawo DNA kubva mhuru 'vabereki uye vanun'una uye vakadzidza kuti mutation uyewo akatonga pano. Izvi zvinoreva kuti nemhuru akakurukura deformation apo mutation zvakapfuudzwa kubva kana amai kana baba uye kwete kubva mai nababa, unova zvazviri nhaka zvirwere zvakawanda.
'Vavariro yedu nguva dzose kuti kuderedza uwandu vanorwara uye akafa mhuru, sezvo vamwe zvirwere nhaka zvinorwadza chaizvo uye munoparadza. Panyaya iyi maziso akarembera pasi kubva pamisoro remhuru, uye zvaunoita chiso chako deformations zvakavaita kuti zvikuru nematambudziko kufema. Hazvina kuoma kufungidzira marwadzo ichi akaita. Research zvabuda vakaita izvi kuchawedzera mhuka kugarika nokusanyanya kupararira kwezvirwere zvakadai. Uye chokwadi uyewo anovandudza mamiriro ezvemari rezvipfuwo varidzi, vanokwanisa kurerutsa nokurasikirwa ', anotsanangura Jørgen Agerholm, anonziwo Musoro Section nokuda Veterinary Pamuviri uye Obstetrics.